A kọwaala ịgụ akwụkwọ oge niile dịka ụzọ pụtara ìhè na usoro kacha mma isi chụọ ìtì bọrịbọ ọsọ ụkwụ erughị ala. Nke a bụ isi sekpụ ntị n'ọgbakọ nkwàlite mmụta na agụmakwụkwọ, bụ nke ọba akwụkwọ ala Nigeria, bụ 'National Library of Nigeria (NLN)' chịkọbàrà, map bụrụkwa nke weere ọnọdụ n'Ebenebe, dị n'okpuru ọchịchị Awka South nke steeti Anambra.
Mahadum Ibadan, Ibadan nọ ụbọchị Tuzdee were kwuo na ụmụ akwụkwọ puku asaa, narị anọ na iri atọ (7,430) agụchaala akwụkwọ ebe mmadụ narị abụọ na iri anọ na otu n'ime ha bụ ndị jiri kụlasị mbụ were pụta na ya bụ mahadum na mpaghara dị iche iche ha gụrụ n'afọ akwụkwọ nke 2017/2018.
Gọọmenti Anambra Ebidorola Ụmụaka Iri Na Isii Akwụkwọ
Gọọmenti steeti Anambra, site n'aka isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe metụtara ndị nne na ụmụaka na steeti ahụ, bụ 'Ministry of Women and Children Affairs' ebidorola ụmụaka ruru iri na isii n'ọnụ ọgụgụ akwụkwọ. Ụmụaka ahụ bụ ndị e tinyèrè n'ụlọ akwụkwọ n'isimbido izuụka a, ma bụrụkwa ndị a kpọtàrà site n'ogige ebe ụmụaka enweghị nne na nnà dị n'ebe dị iche iche.
E Nyela Ndị Nkuzi Anambra Ọzụzụ Iji Usoro ICT Akwalite Mmụta n'Awka
Ebulighị Ụgwọ Akwụkwọ na Mahadum Anyị - Gọvanọ Gwara Ụmụ Akwụkwọ
Ụmụ Akwụkwọ Ondo Emee Ngagharị Iwe Maka Nnukwu Ụgwọ Akwụkwọ
Ndị Ntọ Egbuola Onye Nkuzi Mahadum Igbinedion